साझा प्रकाशन अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा विजयी - Limbuwan khabar
शनिबार, २५ पुष, २०७७ बिहानको ०७:०० बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडौँ। साझा प्रकाशनको २४औँ साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा विजयी भएका छन् ।
नेकपा नेता एवं साहित्यकार डा. सुब्बाले ४१२ मत प्राप्त गरेका थिए । उनको डा. जीवनचन्द्र कोइरालाले भने १८३ मत मात्र प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
यही पुस २१ देखि २४ गते सम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म प्रकाशनको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनका प्रत्यासी अध्यक्ष दुवै जना प्रकाशनका पूर्वसञ्चालक सदस्य हुन् । संस्थाको नयाँ व्यवस्थानुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा पहिलो पटक निर्वाचन भएको हो । विगतमा नेपाल सरकारबाट संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त गरिन्थ्यो । निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
१ हजार ४५७ मतदाता रहेको प्रकाशनमा ६४३ मत खस्दा ४८ मत बदर भएको थियो । यसैगरी संचालक समिति सदस्यहरुमा यसअघि हरिप्रसाद भण्डारी, डिपी अर्याल र सीता ओझा तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजकमा प्रभादेवी बज्राचार्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए ।
आज शनिबार भर्चुअल माध्यमबाटा हुने साधारणसभामा आर्थिक वर्षका प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत र छलफल हुने बताइएको छ ।
संस्थाको कूल नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबाट एक–एक सहसचिव रहनेछन् भने एक विज्ञ सदस्य भने नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।